विप्लव नेकपा वार्ता र संवादबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छ । सरकार आफैँ वार्ताको कार्ड प्रयोग गरेर दमनको सहारामा अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
-- उमा भुजेल ‘शिलु’
वार्तासम्बन्धी विश्वमा थुप्रै घटना छन् । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिन आवश्यक छ । जस्तै बोलिभियाको कम्युनिस्ट पार्टी वार्तामा गयो । त्यहाँको चुनावमा भाग लियो र पराजित भएर पार्टी नै ध्वस्त भयो । चीनमा ३० को दशकमा च्याङ काइसेकले जित्न नसकेपछि वार्ताको आह्वान ग¥यो । चीकपाले चाउ एन लाईको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठायो । च्याङ काइसेकले आधारइलाका छोड् नुपर्ने, जनमुक्ति सेना विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ग¥यो । त्यो प्रस्तावलाई पार्टीले स्वीकार गरेन । त्यसपछि वार्ता भङ्ग भयो र आन्दोलनलाई पार्टीले तीव्रतामा अगाडि बढायो । यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन् जहाँ वार्ताको प्रयोग र त्यसले हाम्रो वर्ग अर्थात् श्रमजीवीहरूका पक्षमा वा विपक्षमा परिणामहरू आएका छन् ।
२. सरकार वार्ता र संवादबाट निकास निकाल्ने भन्दा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको हत्यामा उत्रिएको छ । भोजपुरको ट्याम्के मयुममा गत जेठ ७ गते भोजपुरकै युवा तीर्थराज घिमिरे राजुलाई गिरफ्तार गरी निर्घात कुटपिटपछि सरकारले हत्या ग¥यो । त्यसपछि सर्लाही जिल्लाका पार्टी इन्चार्ज कुमार पौडेललाई असार ५ गते सर्लाहीकै लखन्तीमा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या ग¥यो । उनको हत्याको प्रकृति हेर्दा उनलाई पहिला गिरफ्तार गरी हात भाँचेर कुटपिट गरी गोली प्रहार गरेर हत्या गरिएको स्पष्टै भएको छ । यस विषयमा विभिन्न छानबिन आयोगहरूले पनि कुमार पौडेल मुठभेटमा होइन, गिरफ्तार गरी मारिएको हो भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
३. सरकारले वार्ताको विषयलाई तीव्र ढङ्गले प्रचार गर्दै आए पनि त्यसको अन्तर्यमा तीव्र दमन रहेको जोकोहीले सहजै बुझ्न र देख्न सकिन्छ । अहिलेसम्म सयाँैको सङ्ख्यामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरी झूट्टा मुद्दामा आरोपित गरेर विभिन्न हिरासत र जेलमा बन्दी बनाइराखेको स्थिति छ । आरोपहरू पुष्टि नभएपछि अदालतले नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गरे पनि अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरेर बन्दी बनाइराखेको परिस्थिति छ । वार्ताका निम्ति तयार रहेको कुरा सरकारले बताउँदै आए पनि गाउँगाउँमा सर्च अपरेसन जारी राखेर जनतालाई आतङ्कित बनाइराखेको छ । यही बीचमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् उपत्यका इन्चार्ज माइला लामाको गिरफ्तारीसम्म आइपुग्दा र सरकारले धरपकडलाई तीव्र बनाइरहँदा यस्तो वार्ता कसरी हुनसक्छ ?
सरकारले वार्ताको जतिसुकै हल्ला गरे पनि सरकार वार्ता गर्न तयार छैन भन्ने कुरा उसकै गतिविधिका कारण पुष्टि भएको छ । कुरा एउटा, व्यवहार अर्को गर्नु नै संसदीेय संशोधनवादको मुख्य चरित्र रहेको छ । देखाउँदा खसीको टाउको देखाउने, बेच्दा कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्र रहेको हुन्छ । यो कुरा यतिबेला लागू भैरहेको छ । यस अवस्थामा के वार्ता सम्भव छ त ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्ता र संवादद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अझै पनि राख्छ । वास्तवमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, कलाकार, नागरिक अगुवाहरू, सत्ता पक्षकै केही विशिष्ट व्यक्तिहरू, पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूलगायत देशको ठूलो पङ्क्ति सरकारको यो कदमको विरोधमा खडा हुन पुगेको छ । सँगै सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न र राजनीतिक ढङ्गले समाधान खोज्न, प्रतिबन्ध हटाउन, हत्या र आतङ्क बन्द गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
तर सरकार पक्ष यी विचार र सुझावहरू सुन्न तयार छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक पार्टीका रूपमा होइन, गैरराजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । के सरकार प्रतिबन्ध फुकाउन तयार छ ? नेकपालाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार्न तयार छ त ? हत्या र दमनलाई बन्द गरेर गिरफ्तार गरिएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्न तयार छ त ? घटनाक्रमहरूका आधारमा हेर्ने हो भने सरकार तयार देखिँदैन । सरकारको यो रबैयाले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेलिरहेको छ । यसरी नै देशलाई द्वन्द्वतिर धकेलिरहने हो भने चाहेर वा नचाहेर मुलुक गृहयुद्धतिर अगाडि बढ्ने स्पष्ट छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेकपाले वार्ता नचाहेको भन्ने विषय सही होइन । सत्य कुराचाहिँ के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्ता र संवादबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छ । सरकार आफैँ वार्ताको कार्ड प्रयोग गरेर दमनको सहारामा अगाडि बढ्न चाहन्छ ।